Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ushizi Omusha Wamahhala Wobisi: I-Microalgae yokuqala esekelwe
I-Sophie's BioNutrients, inkampani yesizukulwane esilandelayo esimeme yokukhiqiza ukudla kwasemadolobheni, kanye nesikhungo sokusungula i-Ingredion Idea Labs® e-Singapore, ibambisene ukukhiqiza ushizi wayo wokuqala osuselwe ku-microalgae, owenziwe ngobisi luka-Sophie's BioNutrients olungenalo ubisi lwe-microalgae. Nge-vegan, okukhethwa kukho okungenayo ubisi oshizi okukhuphukayo ekuphenduleni izimfuno zabathengi ezikhulayo zezinye izindlela ezisekelwe ezitshalweni, loshizi ongenalo ubisi uyisengezo esilindelwe kakhulu.
Lokhu kuqanjwa kukashizi kuyaziqhayisa ngephrofayili yokunambitheka kwe-umami kanye ne-tangy, elingisa ushizi we-Cheddar wemvelo futhi ingasikwa kube ibhodi likashizi, incibilikiswe ku-toastie, ifakwe isemishi, noma ihlanganiswe phezu kwama-crackers noma isinkwa njengokusatshalaliswa okucebile kanye ne-gooey.
Noma yini engenziwa ubisi, i-microalgae ingenza i-Cheddar
Ithimba lika-Sophie's BioNutrients lihlanganyele nethimba lochwepheshe bezobuchwepheshe e-Ingredion ukuze bakhe ushizi olungele imifino. Ithuthukiswe kusetshenziswa ufulawa weprotheyini ye-microalgae, itholakala njengezinhlobo ezimbili zemikhiqizo - ushizi we-semi-hard microalgae ongenawo ubisi kanye nokusabalalisa ushizi ongenalo ubisi.
I-ounce eyodwa yoshizi we-semi-hard microalgae inikeza kabili isibonelelo sansuku zonke se-B12. Ibuye ivunwe ngendlela eqhubekayo - azikho izinkomo ezalinyazwa ngesikhathi senqubo - futhi inekhabhoni ephansi.
“I-Microalgae ingenye yezinsiza ezinomsoco futhi ezinothe kakhulu emhlabeni. Namuhla sibonise enye ingxenye yamathuba angenamkhawulo anganikezwa yilokhu kudla okunamandla - okunye okuhlukile kobisi kanye ne-lactose esikhundleni sikashizi, ngenxa ye-microalgae, enikeza okuqukethwe kwamaprotheni aphezulu kunezinye izindlela ezitholakalayo ezingenalo ubisi. Sijabule ngendlela emangalisayo ngale ntuthuko yokudla okungenazo izinto ezingezwani komzimba kanye nethemba lokudla okubandakanya wonke umuntu, ”kusho u-Eugene Wang, Umsunguli kanye ne-CEO ye-Sophie's BioNutrients.
U-Ai Tsing Tan, Umqondisi Wokusungula kwa-Ingredion naye wabelane ngokuthi, “Njengoba sisungula izinto ezintsha ukuze sihlangabezane nezidingo ezishintshayo zabathengi, kubalulekile ukugxila kuzimfanelo ezibalulekile ekudaleni umkhiqizo okhethwa ngabathengi. Indlela yethu yokwenza ushizi ongenalo ubisi ukuwuthuthukisa ngokuseduze ngangokunokwenzeka kushizi kukho kokubili ukunambitheka nokuthungwa. Abathengi bangajabulela ukudla ushizi we-vegan okumnandi, okubonakalayo nokufiselekayo.”
Ukusebenzela ukwakha ikusasa lokudla elizinzile
Lokhu okuqanjwa okusha kusethwe ngokumelene nesizinda sesidingo esinamandla sabathengi sezinye izindlela zobisi ezisekelwe esitshalweni emhlabeni wonke. Ukwanda kokuqwashisa ngezimo zokungabekezelelani kwe-lactose kube yisici esibalulekile ekuqhubekiseni imakethe.
Ngokusho kwenkampani yamazwe omhlaba ecwaninga ngezimakethe i-Research and Markets, imakethe kashizi we-vegan emhlabeni wonke ibilinganiselwa ku-US$1.2 billion ngo-2019 futhi ilinganiselwa ukuthi izofinyelela ku-US$4.42 billion ngo-2027, inweba ngesilinganiso sokukhula sonyaka esiyinhlanganisela (CAGR) sika-15.5% ukusuka ngo-2021 kuya ku-2027. XNUMX.
I-Bionutrients ka-Sophie ikhiqiza ufulawa we-algae ongaxutshwe ne-neutral-hued ongaxutshwe ngokwemvelo otshalwe ku-single-cell microalgae futhi uvunwa zingakapheli izinsuku ezintathu endaweni evikelekile.
Izinhlobo ze-microalgae ezisetshenziswa yi-Sophie's BioNutrients yi-US GRAS kanye ne-European Food Safety Authority (EFSA) egunyazwe ukusetshenziswa njengezithako zokudla noma izithasiselo.
I-Ingredion ihlanganisa ndawonye amandla abantu, imvelo nobuchwepheshe ukwenza yonke impilo ibe ngcono. U-Ingredion uzibophezele ekuthuthukiseni ukuvikeleka kokudla ngokusebenzisa izinqubo ezisimeme zokuthola usizo kanye nokunikezwa kwemikhiqizo okuthuthukisiwe ukuze kusekelwe ukuphepha kokudla, okuhlanganisa ukugxila kwamanye amaprotheni. I-Ingredion ihlinzeka ngobuchwepheshe bokuletha imikhiqizo ekhethwa ngabathengi ekudaleni ngokuhlanganyela okulandelayo nge-Bionutrients ka-Sophie.